Mauritius kwụsịrị ịpụ iche maka ndị njem nleta ejiri ọgwụ mgbochi akwadoro
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ na -agbasa na Mauritius » Mauritius kwụsịrị ịpụ iche maka ndị njem nleta ejiri ọgwụ mgbochi akwadoro
Ndị njem nlegharị anya nke Africa • Airlines • Airport • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ Ahụike • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • Akụkọ na -agbasa na Mauritius • News • ndị mmadụ • Iwughachi • Resorts • Ịrụ ọrụ • Safety • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a
Mauritius kwụsịrị ịpụ iche maka ndị njem nleta ejiri otu n'ime ọgwụ mgbochi COVID-19 akwadoro asatọ
Ọrịa ọjọọ ahụ kpatara nnukwu mbibi akụ na ụba mba ahụ. N'ime afọ ego gara aga, GDP ya dara 15%. Ọrụ ọ bụla nke anọ ọ bụla na Mauritius metụtara njem, yana akụkụ nke GDP ruru 24%.
Mauritius mechiri ndị njem si mba ọzọ ókè ya na mbido ọrịa na March 2020.
Mauritius mepeghachiri ókèala ya na Julaị 15, 2021, mana ndị mbịarambịa ọhụrụ niile ga-anọrọ iche ụbọchị iri na anọ.
Sputnik V nke Russia mere bụ otu n'ime ọgwụ mgbochi asatọ megide coronavirus akwadoro n'àgwàetiti ahụ.
Ndị ọchịchị Mauritius kwupụtara na malite na Ọktọba 1, mmachibido niile na mmegharị ndị njem nlebara anya na otu n'ime ọgwụ mgbochi asatọ megide coronavirus akwadoro n'àgwàetiti ahụ.
Borderskè ya Mauritius emechiri ndị njem mba ofesi kpamkpam na mbido ọrịa a na Machị 2020. E mepeghachiri ha na July 15, 2021 mana, ndị bịara ọhụrụ ga-anọrọ iche ụbọchị iri na anọ. Ka ọ dị ugbu a, ọnọdụ ọnụnọ nke ndị njem nlegharị anya si mba ọzọ na -etinye ọgwụ mgbochi nke ndị ọchịchị obodo kwadoro.
Dabere na onye nnọchi anya ụlọ ọrụ nnọchi anya Russia na Mauritius, Sputnik V nke Russia so na ọgwụ mgbochi COVID-19 asatọ akwadoro n'àgwàetiti ahụ.
Ndị njem nlegharị anya Russia ejiri ya Sputnik Ise na -abata Mauritius agaghị enwe ike ichepụ iche malite taa wee nwee ike ịgagharị na mpaghara ala agwaetiti a, onye nnọchi anya mba ahụ kwuru.
Ọ sịrị, "Tupu mgbe ahụ, ha ga-anọpụ iche izu abụọ na ogige ụlọ oriri na ọ hotelsụ hotelsụ," na-agbakwụnye na a na-atụ anya na ụgbọ elu na-aga n'etiti obodo Mauritius na Russia ga-amaliteghachi n'ọdịnihu dị nso.
Emere Russia Sputnik Ise A na -eji ọgwụ mgbochi eme ihe n'ọtụtụ ebe Mauritius. Otu nke mbụ ya batara na mba ahụ na June 30. Malite na Julaị 12, ejiri Sputnik V mee ihe n'ịgba ọgwụ mgbochi mba Mauritius yana mgbọ ndị ọzọ.
Mauritius bụ otu n'ime ndị isi na Afrịka n'ihe gbasara ọnụọgụ ndị agbadoro megide coronavirus. Ejirila ihe dị ka nde 1.63 ịgba ọgwụ mgbochi megide COVID-19 n'àgwàetiti ahụ, mmadụ 788,000 ma ọ bụ 62.2% nke ndị mmadụ emechala usoro ịgba ọgwụ mgbochi zuru oke.
Ọrịa ọjọọ ahụ kpatara nnukwu mbibi akụ na ụba mba ahụ. N'ime afọ ego gara aga, GDP ya dara 15%. Ọrụ ọ bụla nke anọ ọ bụla na Mauritius metụtara njem, yana akụkụ nke GDP ruru 24%. Gọọmentị obodo a na -achọ ịdọrọ ihe dị ka ndị njem nlegharị anya 650,000 na Mauritius n'ime ọnwa iri na abụọ sochirinụ.